Moe Kai: ခါးနာတတ်သူ နဲ. ပိုးသတ်ဆေး
ခါးနာတတ်သူ နဲ. ပိုးသတ်ဆေး
တလောက ထွက်လာတဲ့ စာစောင်တချို.မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ နာတာရှည် ခါးနာတတ်သူတွေနဲ. ရက် ၁၀၀ ပိုးသတ်ဆေးကုထုံးကို လူအတော်များများ စိတ်ဝင်တစားရှိလှ ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံမှာ ခါးနာတဲ့သူတွေ အလွန်ပေါပါတယ်။ နေမကောင်းလို. အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ Off Sick ခေါ်ရတဲ့ ရောဂါတွေထဲမှာ ခါးနာတာက နံပါတ် ၁ ကနေ ၅ အတွင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာတွေ.ရတဲ့ လူနာတွေ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် တွေမှာလဲ အတော်များများဟာ ခါးနာတတ်သူတွေ ဖြစ်နေပြန်တယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် ခါးနာတတ်သူတွေကို exercises (အများအားဖြင့်တော့ ကျမတို. ခေါ်တဲ့ Core muscle exercises/ Core stability exercises) ဆိုတာတွေနဲ. သက်သာအောင် နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် သင်ပြ ရှင်းပြ ရပါတယ်။ တချို.လဲ သက်သာသွားပြီး တချို.ကြတော့လဲ Private Physio/ Chiropracter ဆိုတာတွေနဲ. အပ်စိုက်တာ၊ နှိပ်တာ၊ အဆစ်တွေ လျော့အောင် manipulation ဆိုတာတွေ အမျိုးမျိုး စမ်းသပ် ကုကြတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ပျောက်တဲ့သူ ရှိသလို ဆရာများ သားသေ၊ ပိုဆိုးပြီး နာတာရှည် ဖြစ်ကုန်တာတွေကလဲ အလွန်များတာကိုး။ ခက်တာက ဒီနိုင်ငံမှာ Benefits/ compensation ဆိုတာတွေက ရှိတော့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ရင် အစိုးရ ထောက်ပံ့စာနဲ.သက်တောင့်သက်သာ အိမ်မှာနေပြီး ကောင်းကောင်း စားလို. နေလို.ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ တချို.ကလဲ ရောဂါ မသက်သာချင်တော့ ..။ အဲဒီတော့ အခက်တွေ.တာ ကျမတို.လို ကျန်းမာရေး နယ်ထဲကသူတွေ။
ခါးနာရခြင်း အကြောင်းရင်းကလဲ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ခါးမှာ Vertebra ဆိုတဲ့ အရိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ vertebra တွေရဲ. ကြားမှာ Disc ဆိုတဲ့ အရိုးပါး ဂျက်လီ အိပ်ကလေးတွေ ရှိပါတယ်။ vertebra တွေ ကြားထဲကနေ အာရုံကြောလေးတွေ ထွက်လာပြီး ခြေထောက်ထဲကို သွားကြတယ်။ vertebras အရိုးတွေ သူ.နေရာ တကျရှိအောင် ထောက်ခံပေးထားတဲ့ ကြွက်သား အရွတ်(fascia) ဆိုတာတွေကလဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီတော့ ခါးနာတာ ဘေးထောက်ခံထားတဲ့ ကြွက်သား အရွတ်တွေက နာတာလား (ကျမတိုခေါ်တဲ့ Mechanical back pain)။ Disc ကလေး ပေါက်သွား ကျွန်သွားပြီး နာတာလား။ ခါးမှာ အာရုံကြောညှပ်မိပြီးနာတာလား အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ရှင်းရရင် စာအလွန် ရှည်သွားမှာမို .... အားလုံး ကျော်ချပါပြီ။
အခုပြောမှာက Disc ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ခါးနာတတ်သူတွေ။ Disc က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပေါက်သွားပြီး အထဲက ဂျယ်လီလို အရာလေးတွေ ကျွန်ထွက်လာပြီး ဘေးမှာရှိတဲ အာရုံကြောလေးတွေကို သွားဖိမိတတ်ပါတယ်။ တချို. လူနာတွေကတော့ ဘာမှ လုပ်စရာမလို အချိန်ကြာလာတာနဲ. အမျှ ပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် တချို.လူနာတွေမှာတော့ steoid နဲ. Nerve Block ဆေးထိုးပေးရတာ၊ ဒါမှမသက်သာသေးရင် ခွဲကုရတဲ့ Microdiscetomy (ကျွန်နေတဲ့ disc နေရာလေး လှီးထုတ်ပစ်တာ) Vertebra fusion (disc တခုလုံး ဖယ်ထုတ်ပြီး အရိုး ၂ခု ဆက်လိုက်တာ) ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်ရပါတယ်။
အဲဒီမှာ သုတေသန အုပ်စု တစုက တွေ.လာတာ လူနာအများစုရဲ. ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ disc မှာ Propionbacterium acnes လို.ခေါ်တဲ့ ပိုးဝင်နေတာ တွေ.ရတယ်တဲ့။
ဒါနဲ. လူနာ အုပ်စု တစု (Disc ကျွန်ပြီး ၆လကျော် ခါးနာသူများ၊ MRI scan မှာ disc protrusion + Modic changes (ဘေးက vertebra အရိုးမှာ ရောင်နေတာ) ရှိတဲသူတွေ) စုပြီး ရက် ၁၀၀ ပိုးသတ်ဆေး (Amoxicillin + Clavulanic acid 500/125) ကိုပေးကြည့်ပါတယ်။ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁နှစ် follow up မှာ ပိုးသတ်ဆေး သောက်တဲ့ သူတွေက Placebo သောက်သူတွေထက် သိသိသာသာ တော်တော် သက်သာလာတာ တွေ.ရသတဲ့။
စာရေးပျင်းတော့ သေသေချာချာ အသေးစိပ်တော့ မရေးတော့ပါ။ ဒါပေမယ့်တွေးမိတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ပိုးသတ်ဆေး အကန်းအသပ် အတားအမြစ် မရှိ တွင်တွင်သုံးပြီး Physio ကောင်းကောင်း မရှိတဲ့ နိုင်ငံလိုမျိုးမှာ ဒါဟာ နာတာရှည် ခါးနာသူတွေအတွက် ပုစ္ဆာ အဖြေ တခုများ ဖြစ်လာ မလားလို.ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ နဲ. ဆက်သွယ်ရေး
Rick Heizman's response article to Hannah Beech's ...
ဆရာဝန် နဲ. လူနာများ